Ingabe uyazi abenyukela indlela yokwenza chocolate hot ekhaya? ndela Mexican! Ukuze kukhanye up ezinzima ekuphileni kwansuku zonke, egcwele ebusuku vigils nemithandazo, bahlakaniphile ngokwanele ukutshala nokhokho oyimpuphu ubisi engeza ukuba umoba. Isiphuzo okuholela ngokuphelele uyavuma, kepha inyama ondliwe sekuqala ukufudumala. Ngaphezu kwalokho, ijabulisa impilo okuyisidina Hermits. Ngokushesha niphuza iresiphi gone ngaphesheya cloisters futhi ahlanganiswe umehluko wemisindo nemiqondo yamagama amasha. Manje kunezindlela eziningi yokulungiselela ushokoledi ashisayo. Nazi ngokuhle kunakho konke kwawo.
Ngaphambi kokwenza chocolate hot ekhaya, kubalulekile ukuba ibe yimpahla imikhiqizo eziyisisekelo. Ubisi kumele kube iphilile fresh. Kunoma ikuphi, ungayisebenzisi powder noma isitoreji yesikhathi eside. Uma unquma ukusebenzisa non-nokhokho oyimpuphu kanye kashokholethi, lona wamuva kumele kube eliphezulu. Okungukuthi, ngaphandle admixture lamafutha esundu namanye amakhemikhali, kanye kungekho fillers. Lokubiza cocoa kuwo kungabi ngaphansi kuka-70%. Ukuze yokuntuleka umoba ovunyelwe ukusebenzisa ezivamile, beetroot.
Manje inqubo ukupheka. Indlela yakudala indlela yokwenza chocolate hot ekhaya, kudinga ukugaya othayela isimo ezinhlamvwini zekhofi. Lokhu kungenziwa ngosizo a blender noma grater. Uma usebenzisa nokhokho oyimpuphu, esigabeni ukulungiselela ingase yeqiwe. Ebhodweni elikhulu, uthele amanzi awubeka umlilo. I abilayo yensimbi ketshezi beka isitsha ku lapho sithululela ingilazi yobisi. Ngo ukupheka, le ndlela ibizwa ngokuthi "okugeza amanzi". Bowl Akufanele athinte phansi pan. A ubisi badinga kuphela ukuba babe kushisa kakhulu, hhayi abilayo.
Khona-ke, emanzini efanayo ukubila kufanele bacwiliswa Kwenye indishi - ushokoledi othulini noma nokhokho oyimpuphu. Kufanele kancane phambi lokhu zohlobo wezipuni ezimbalwa ubisi. Hold on a okugeza amanzi kuze kube tincetu ngeke ketshezi. Susa kusuka ukushisa bese uxove kwamaminithi ambalwa, esikhiqiza a motion isiyingi sonke isikhathi kwelinye direction. Phezulu ubisi ezisele, engeza wezipuni amabili (nokhokho oyimpuphu) ushukela. kuhlangana Obuphelele - kokubusa eziyisisekelo indlela yokwenza chocolate hot ekhaya. IMisa futhi wafaka okugeza amanzi. ezintathu kuphela imizuzu.
Bese wengeza flavour zakho ozithandayo: usinamoni, amakinati, vanilla elikhuhluziwe. Nakulokhu futhi, isiyaluyalu futhi ushiye sokunika isiphuzo angu-10. Ngesicelo usuvele izinkomishi, ungakwazi ukwengeza imihlobiso ezahlukene: ophehliwe, inkanyezi anise futhi marshmallow. a chocolate hot okunjalo, isithombe okuyinto ubona, akanamahloni ukufaka kanye itafula idili elimnandi.
Futhi ekupheleni - iresiphi zakudala. Esikhundleni ubisi zisebenzisa amanzi. Shisisa ke futhi uthele ochotshoziwe 100-igramu ushokoledi ibha. Govuza kuze iyunifomu nokuzama ukushayela isikhuphasha neqanda. Lapho mass uqala ukushwaqa, ukuzalela ngayo esincane ukhilimu omuncu. Ngasekupheleni thina wengeza amaconsi ambalwa yotshwala. Futhi ungakwazi ukupheka Mexican. Ilungiselela ikhofi ubisi ingcosana isinamoni, ushokoledi elicibilikile kuwo. Ukuvusa kuze homogeneity sypem ushukela. Kwenye isitsha, beat amaqanda a Foam, kancane kancane ngokungeza ingxube ukuxoxa ukuze namaprotheni hhayi curled. Ngakho ukulungiselela chocolate saseVienna hot ekhaya.